Izu Ịmata njem nlegharị anya iji gbado anya na njem nlegharị anya maka ito eto
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Izu Ịmata njem nlegharị anya iji gbado anya na njem nlegharị anya maka ito eto
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • nzukọ • News • Iwughachi • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Jamaica na -eme ememme ụbọchị ndị njem ụwa
Ministri njem nlegharị anya nke Jamaica, ụlọ ọrụ ọha ya, na ndị mmekọ njem, gụnyere Jamaica Hotel na Association Njem Nleta (JHTA), ga -eme ka ọ pụta ìhè ọrụ dị mkpa ndị njem na -arụ n'ịkwalite nsonye na uto akụ na ụba ka ha na -ahụ izu mmata njem (TAW) 2021.
Ihe omume nke afọ a ga -abụ mmemme nke ike ndị njem nwere ike ịkwalite mmepe yana ị nweta ohere nye nde mmadụ n'ofe ụwa niile.
N'ime izu ahụ dum, Ministụ ahụ ga -eji usoro mgbasa ozi na igwe eletrọnịkị pụta ìhè n'ọtụtụ atụmatụ ha.
Ihe omume ndị ọzọ gụnyere ngosi ngosi mebere na Septemba 27, egwu egwu mebere na Ọktọba 1, na asọmpi vidiyo ntorobịa.
Ememe afọ a ga -etinye ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa, nke UN UNTO World Tourism Organisation (UNWTO) na -eme kwa afọ na Septemba 27 na ebe gafee ụwa. A ga -ahụ ụbọchị a n'okpuru isiokwu "Njem Nleta maka Uto Gụnyere," nke ga -abụkwa isiokwu maka TAW 2021, nke akwadoro ịmalite site na Septemba 26 ruo Ọktọba 2.
Ọ ga -abụ mmemme ike ndị njem nwere ịchụpụ mmepe yana itinye ọtụtụ nde mmadụ n'ụwa niile ohere.
Dị ka UNWTO si kwuo: “Nke a bụ ohere ileba anya karịa ọnụ ọgụgụ ndị njem ma kweta na, n'azụ ọnụọgụ ọ bụla, enwere mmadụ… Iji mee mmemme pụrụ iche nke njem nlegharị anya iji hụ na onweghị onye fọdụrụ ka ụwa malitere imeghe ọzọ wee lee anya maka ọdịnihu. ”
Izu ụka a ga -amalite site na ọrụ ụka nke ọma na Sọnde, Septemba 26. N'ime izu ahụ niile, ndị ozi na ụlọ ọrụ ọha ga -eji usoro mgbasa ozi ebipụta na elektrọnik iji gosi ọtụtụ atụmatụ ha nke na -akwalite uto. Ihe omume ndị ọzọ gụnyere ngosi ngosi mebere na Septemba 27, egwu egwu mebere na Ọktọba 1, na asọmpi vidiyo ntorobịa.
Onye minista njem nlegharị anya Hon. Edmund Bartlett na -ekwupụta mkpa isiokwu ahụ dị, ma kesaa na ebumnuche nke ozi ya, "bụ mgbe niile ịmepụta ngwaahịa njem nlegharị anya ebe a na -ekesa nnukwu uru n'etiti ọha mmadụ." Ọ kwusiri ike na: "Njem nlegharị anya bụ ihe gbasara onye ọrụ ugbo, onye na -ere nka, onye na -eme ihe nkiri, na onye na -eweta ụgbọ njem dịka ọ dị gbasara onye na -ere ahịa, onye na -eri oriri, na onye na -ahụ maka ihe nkiri."
“Njem nlegharị anya bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa ma na-etokwa ngwa ngwa, ọ bụkwa isi iyi nke ọtụtụ mba na-enweta ego. Na Jamaica, njem bụ bred anyị. Njem nleta bụ injin akụ na ụba anyị. Ọ na -emepụta ọrụ, na -adọta ego mba ofesi, na -akwalite mmepe nke akụrụngwa dị oke mkpa, ma na -akwalite azụmahịa n'ofe ọtụtụ ngalaba. Nke kachasị mkpa, ọ na -akwalite uto akụ na ụba yana mmegharị mmekọrịta ọha, ”ka ọ gbakwụnyere.
Agbanyeghị na ọrịa COVID-19 emetụtala uto nke ngalaba ahụ nke ukwuu, nke mebiri ọrụ akụ na ụba ụwa, Bartlett kwusiri ike na nkwado na enweghị ike dị oke mkpa na usoro mgbake ahụ.
“Ihe mkpuchi ọlaọcha bụ na nsogbu COVID-19 enyela anyị ohere ịtụgharị uche na wughachi ụlọ ọrụ a na-eguzogide iji mezuo iwu a nke ọma. Nkwado na ịgụnye ya bụ ihe dị mkpa na usoro mgbake ahụ. Yabụ, ka anyị na -eji ohere ndị dị na nsogbu a, anyị na -etinye usoro dị mkpa iji wughachi ngwaahịa dị mma, nha nha ma na -ewepụta ohere akụ na ụba maka ndị Jamaica, "ka o kwuru.